Rakibidda xeryahooda Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Warshadda Isukeenaysa
Sanding Disc Holes Dahab warqad sanding for ...
Qalabka Waraaqda Filimka Cagaaran ee Caagga ah Waraaqda Saxanka -L911
Rinjiyeynta La tuuro Koobka Qoriga
Xaashida Wareegsan ee Wareegsan ee loogu talagalay Random Orbital Sander-A720T
Iibinta badan Multifunction Fast Wax Car nadiifinta-XYS-A2
XYS-A2 Fast Wax waa badeecad isku soo uruurisa wax dhoobada iyo waxabka muraayadda. Waxay si dhakhso leh oo wax ku ool ah uga takhalusi kartaa calaamadaha ciidda ee ka hadhay ka dib marka la xoqo warqadda ciidda ee P1500-P2000 isla markaana lagu gaaro natiijada muraayada. Isugeynta sare, goynta sare ee emulsion-ka oo kale ayaa ah "hal talaabo nadiifin ah," hufnaan sare, xawaare sare, iyo dhalaal sare.
CHEAP HEYVY CUT POLISHING COMPOUT EE CARUURTA FAST POLISH-XYS-CY0815
Badeecadani waa wakiilka xoqida rinjiyeyaasha xirfadlayaasha ah ee loo isticmaalo mashiinka wax lagu nadiifiyo oo leh xawaare wareegaya 1400-2000 rpm. Waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa calaamadaha ciidda ee warqadda ciidda ee P1000-P1200 iyo xoqitaannada kale ee halista ah iyo lakabyada xabagta ee daran. Haddii la adeegsanayo XYS CY-0187 Wax Fiican Nadiifinaya, Saamaynta ayaa ka sii wanaagsan!
Tijaabooyinka Baabuurta ee Xannaaneynta Gawaarida Daryeelka Gawaarida-XYS-CY0816
Badeecadani waa wakiilka xoqida rinjiyeyaasha xirfadlayaasha ah ee loo isticmaalo mashiinka wax lagu nadiifiyo oo leh xawaare wareegaya 1400-2000 rpm. Waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa calaamadaha ciidda ee P1200 iyo warqadda ciida ee wanaagsan. Haddii aad isticmaaleyso wakiilka daaweynta muraayadda XYS CY-0818, saamaynteedu way ka fiican tahay!
Xarunta Birta ee Nadiifinta Dufannada-XYS-CY0817
Waa makiinad rinji yaqaan xirfadle ah oo loo isticmaalo mashiinka wax lagu nadiifiyo oo xawaarekiisu yahay 1000-2000 rpm. Waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa calaamadaha ciidda ee P1500 iyo warqadda ciidda wanaagsan, iyo sidoo kale ka saarista xoqidda kale ee wanaagsan, cilladaha, iyo lakabyada xabagta!
XYS Xirfadlaha mashiinka nadiifinta farsamada-CY0818
Badeecadani waa xirfadle muraayad dhameystiraya muraayadaha gawaarida ee loo isticmaalo mashiinka wax lagu nadiifiyo oo leh xawaare wareegaya 1200-2000 rpm. Si dhakhso leh oo wax ku ool ah uga saari karaa dhammaan noocyada rinjiga ranjiga sumadaha giraanta, si loo gaadho saamaynta muraayadda-dhalaalka sare leh!